अध्यक्षकै टोलमा विकासको यो गति, भ्यु टावर निर्माणको ६ महिनामै भत्कियो (भिडियो सहित) | Sindhu Jwala
साउन १४, ठोकर्पा (सिन्धुपाल्चोक) । जिल्लाको एक गाउँपालिका अध्यक्षको गाउँमै विकास निर्माणमा अनियमिता भएपछि अन्यन्त्र के भयो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रसंग हो, सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर २ थाँम डाँडामा निर्माण भएको भ्यु टावर । जुन निर्माण सकिएको ६ महिना नपुग्दै भत्किएको छ । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् श्रवण कुमार जिसी । भ्यु टावर निर्माण गरिएको वडा नम्बर २ अध्यक्ष जिसिकै गाउँ पर्छ ।
तर गाउँपालिका अध्यक्षकै गाउँमा विकास निर्माण चरम लापरवाही हुनु जनप्रतिनिधिको कमजोरी भएको स्थानीयको आरोप छ । टावर निर्माणमा असाध्यै लापरबाही भएको स्थानीय उद्वव न्यौपानेले सिन्धुज्वालालाई बताए । उनका अनुसार कमजोर पर्खाल लगाईएको कारण टावर मुनि ठूलो पहिरो झरेको छ । त्यस्तै वरीपरी ठूलै धाँजा फाटेको छ । भदौ सम्ममा वरीपरिको भाग सबै झर्ने उनले दावी गरे । स्थानीय जनतासंग समन्वय नगरी हतार हतारमा निर्माण व्यवसायीले काम गर्दा निर्माणमा लापरबाही भएको उनको ठहर छ । खानेपानीको अभाव झेलिरहेका स्थानीय जनतालाई टावर निर्माण गरिने कुरामा कुनै जानकारी तथा छलफल नगरिएको स्थानीय हेमबहादुर बरुवालले दुखेसो पोखे । ‘हामीलाई निर्माणको बेला कुनै जानकारी नै छैन, टावर निर्माण गरिदै छ भन्ने सुनियो’, स्थानीय बरुवाले भने । भ्यू टावर उदघाटनमा समेत स्थानीय जनतालाई कुनै जानकारी नै नगरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको उनको दावी छ । टावर निर्माण गर्ने ठेकेदार र अनुगमन गर्ने स्थानिय सरकारको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको सामान प्रयोग गरिएको उनीहरुको आरोप छ । स्थानीयका अनुसार उक्त भ्युटावरको फलाम ग्याल्भनाईज गरेको हुनु पर्नेमा त्योसा नगर्दा पुरै खिया लागको पाईएको छ । त्यस्तै मेशिनरी वालमा सिमेन्ट नै प्रयोग नगरेको पाईयो र कमसल निर्माण सामाग्रीको प्रयोग भएको स्थानीयको दावी छ ।
निर्माणमा देखिएको चरम लापबाहीको सत्य छानबिन गरी कारबाही गर्न समेत गनुपर्र्ने स्थानीयको जोड छ ।
प्राविधिक ज्ञान र निर्माणमा त्रुटीका कारण नसेचेको क्षति भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रवणकुमार जिसिले बताए । ‘डिपिआर गर्दा हो या निर्माणको क्रममा हो क्षति हुनुमा प्राविधिक त्रुटी देखिन्छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष श्रवणकुमार जिसि ‘बिनोद’ले सिन्धुज्वालासंग भने । पालिकाको आफ्नै स्रोतमा बनेको गौरवको आयोजना थाँमडाँडा भ्यु टावर जिल्लाकै उत्कृष्ट र नमुनायोग्य बनाउन खोज्दा खोज्दै क्षति पुगेपछि आफुलाई निकै दुखित तुल्याएको उनले बताए । क्षति भएको ठाउँमा मर्मत नगरेसम्म अन्तिम भुक्तानी नदिने उनले ठोकुवा गरे ।
‘प्राविधिकले स्टमेट बनाउने हो, हामीले स्टमेट अनुसार बनाएका हौं’, निर्माण व्यवसायी गंगाबहादुर तामाङ ‘प्रवेश’ले भने । माटो फिलिङ गर्दा केही हुँदैन भनेर प्राविधिकले सल्लाहा दिएको आधारले काम गर्दा क्षति व्यहोर्नु परेको उनले सुनाए । ठाउँ–ठाउँमा वाल चर्केर पहिरोले क्षति पु¥यापछि घाटानै लाग्ने भएपनि पुनः मर्मत गरिदिने उनले प्रतिवद्वता जनाए ।
माटोनै माटोले भरिएको उक्त ठाउँमा खुकुलो माटोमा पानी छिरेर लच्किएको भ्यु टावर निर्माको साईड हेरेका प्राविकि रञ्जन न्यौपानेले सिन्धुज्वालालाई बताए । निर्माणमा केही प्राविधिक त्रुटी रहेको स्विकार्दै प्राविधिक न्यौपानेले भने, ‘माटो हाल्दा यस्तो होला भनेर हामीले सोचेनौं तर त्यहि माटोको कारण यतिधेरै क्षति हुन पुग्यो ।’ ‘वाल व्याकफिल गर्नैपर्ने थियो, क्रिटिकल माईनर लियौं’, उनले थपे ।
भ्यु टावर निर्माण भएको ६ महिना नपुग्दै क्षतिग्रस्त भएपछि ठोकर्पाका स्थानीयले छानविनको माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा समेत ठोकर्पाको भ्यु टावर निर्माणमा भएको त्रुटिका विषमा व्यापकता पाएको छ ।
टावरको उद्घाटन गत बैशाख १७ गते नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतले गरेका थिए । करिब एक करोड २५ लाखमा निर्माण गरिएको उक्त टावर निर्माणको टेण्डर टक्सार निर्माण सेवालाई परेको भएपनि निर्माणको जिम्मा निर्माण व्यवसायी बलेफी गाउँपालिकाका गंगाबहादुर तामाङ । सुनकोशीका अर्जुन थापाले लिएका थिए ।
This entry was posted in स्थानीय तह, समाचार, विशेष, अर्थ, पर्यटन, सुनकोशी गाउँपालिका, शिक्षा. Bookmark the permalink.
‘संविधान संशोधन गर्न नहुने कुनै बाईबल ग्रन्थ होईन’–प्रचण्ड